Ike Blue | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Echiche nke acha anụnụ anụnụ bụ nnọọ amaghị nke ọtụtụ ndị mmadụ, ma ọ na-ezo aka na isi iyi nke ogbara ohuru nke onye pere mpe.
Blue ike bụ ike ewepụtara site na ngwakọta nke nnu nnu site n'oké osimiri yana mmiri ọhụrụ sitere n'osimiri. salinity na osmotic mgbali mmiri na-emepụta ike, nke a pụrụ iji mee ihe dị iche iche.
Usoro a na-eme n'ụzọ nkịtị na ụfọdụ ebe dị na mbara ala ma nwee ike iji nweta ike dị ọcha.
Typedị isi iyi a bụ ebe obibi obibi ebe ọ na-anaghị ewepụta gas dị ka carbon dioxide, ọ nwere obere mmetụta gburugburu ebe obibi ebe ọ bụ na a ga-ewu osisi n'okpuru ala ka ọ ghara ịgbanwe mpaghara ma ọ bụ gburugburu ebe obibi.
Ọ naghị agbanwe ogo ma ọ bụ inye mmiri ọ drinkingụ drinkingụ maka obodo ndị dị nso.
Ọ bụkwa usoro dị oke mma ebe ọ bụ na mmekọrịta dị n'etiti elu na ike enwere ike nweta site na ebe ahụ dị mma. Otu cubic mita nke mmiri na-enye ohere ịwepụta nnukwu ume ike.
Ebe ndị a pụrụ itinye igwe ike ọkụ bluu bụ ebe osimiri na-asọba n’oké osimiri.
Ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ obodo na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri ndị a, ya mere ọ bara ezigbo uru ịnwe ike ịnye ike ọ bụghị naanị maka ụlọ ma ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Ike igwe nwere nnukwu ikike dị ka ihe ọzọ n’ọdịnihu.
Ugbu a osisi izizi nke ejiri igwe ike wee rụọ na Norway na 2009. N'ebe a, anyị na-enyocha otu esi emeziwanye ọrụ ya na arụmọrụ ya. nkà na ụzụ iji nweta na usoro a bụ ọbụna ihe oru oma na ike ga-eji na n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ebe ọdịdị ala kwere ya.
Blue ike nwere ike ịbụ ezigbo obodo ume isi na bụ akụkụ nke a mix nke ike mmeghari ohuru nke na-enye obodo na obodo nta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike imeghari ohuru » Ike Blue
Busgbọ ala ebe obibi na ebe obibi na obodo Spanish